» मुख धुँदा यी गल्तीहरु त गरिरहनु भएको छैन ?
मुख धुँदा यी गल्तीहरु त गरिरहनु भएको छैन ?
१२ जेष्ठ २०७५, शनिबार १०:५६
एजेन्सी, १२ जेठ । मुख धुने काम सबैले दैनिक रुपमा पटक पटक गर्ने काम मध्येमा पर्छ । तर दैनिक रुपमा पटक पटक गरिने यो काममा पनि हामीले गल्ती गरिरहेका छौं भन्ने कुरा धेरैलाई ज्ञान हुँदैन । हामीले मुख धुनकालागि विभिन्न विधिहरु अपनाउँछौँ । त्यतिमात्र हैन बजारमा पाईने विभिन्न किसिमका माउथ क्लिनरहरुको पनि हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ । तर यसो गर्दा पनि हामीले मुख धुँदा विभिन्न गल्तीहरु गरिरहेका हुन्छौं । तपाईँले पनि मुख धुँदा यी गल्ती गरिरहनु भएको त छैन ?
१) अनुहारलाई हानी गर्ने क्लिनरको प्रयोग कहिल्यै पनि नगर्नुस् । अनुहार चाहिने भन्दा बढी नधुनुस् । यसो गर्दा अनुहारको त्वचामा असर गर्छ र छालाको समस्या देखापर्छ । ध्यान दिनुस्– जब अनुहार धुनु हुन्छ त्यतिबेला हल्का मनतातो पानी प्रयोग गर्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ ।
२) फेस वाश वा सावुन अनुहारमा धेरै बेर सम्म नरगड्नुस् । अनुहार सफा गर्दा हतार नगर्नुस् । सधै राम्रोसँग अनुहार सफा गर्नुहोस् । अनुहारमा असर गर्ने उत्पादन जतिसुकै आकर्षक भएपनि प्रयोग नगर्नुस् । अनुहार सफा गरेपछि मुलायम रुमालले पुछ्नुस् । अनुहारमा धेरै रगड्नु घातक हुन सक्छ ।
३) अनुहार सफा गरेपछि त्वचा सुख्खा नहोस् भन्नका लागि मोइस्चराइजिङ क्रिम लगाउनुस् । अनुहारमा लगाउने कुनै पनि उत्पादन किन्दा आप्mनो छालाको प्रकृति अनुसार विचार गरेर मात्र किन्नुस् । अनुहारमा मसाज गर्नु पनि राम्रो मानिन्छ । तर यसका लागि आफूलाई मिल्दो तेल मात्र प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यसको असर नराम्रो हुन्छ ।
अंशिका शर्मा बनिन् मिस युनिभर्स नेपाल २०२० को विजेता
यी हुन् मिस युनिभर्स नेपाल २०२० का उत्कृष्ट २१ प्रतियोगीहरु
मकवानपुरमा थप ३७ जनामा कोरोना संक्रमण (विवरण सहित)
हेटौँडामा थप एक जनामा कोरोना, मकवानपुरगढीमा पनि पहिलो संक्रमण
नेपालमा कोरोना संक्रमित भएका १४ जनाको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा तेस्रो व्यक्तिमा पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि,को हुन् तेस्रो व्यक्ति ?